Waa maxay iyo sidee Uber Eats u shaqeysaa? | Androidsis
Waa maxay iyo sidee Uber Eats u shaqeysaa?
DaniPlay | 24/04/2021 23:59 | Codsiyada Android
Geynta guriga waa u muhiim makhaayadaha, baararka iyo meheradaha maxalliga ah magaalo kasta oo adduunka ka mid ah. Xawliga weyn wuxuu horseeday inay soo ifbaxaan shirkado caan ah sida Glovo, Uber, Deliveroo iyo Just Eat, dhammaantoodna waxay wataan dadkooda wax geeya.
Ganacsiyo badan ayaa go'aansaday inay uga tagaan qaybinta cuntada gacmahooda, si loo yareeyo kharashka, loo helo shaqo iyo wixii ka sarreeya xawaaraha adeegga. Qaarkood maanta waxay shaqaaleeyaan shaqaale iskood u shaqeysta, muhiim u ah daboolida baahida weyn ee amarrada ka imanaya dhismaha.
Uber waxay go'aansatay inay bilawdo adeeggeeda 2014 si ay ula kulanto amarrada ka imanaya baararka, makhaayadaha iyo ganacsiyada cuntada degdegga ah, muddo dheer ka hor intaanay adduunka oo dhan ka bilaabin VTCs (Baabuurta wata Darawalka). Uber Eats waxaa quudiya wadayaal iskiis u madax-bannaan, taas oo muddo ka dib diyaaradaha lagu daray shaqaale dibadeed. Waan ku tuseynaa sida Uber Cunto u shaqeyso.
1 Waa maxay Uber Eats?
2 Amarada shabakada
3 Rakibaadda Codsiga
4 Sidee ku bixisaa Uber Eats?
5 Liisaska dalabka
6 Dalbo Uber Cunnada
6.1 Si aad uga dalbato Uber Eats, samee waxyaabaha soo socda:
7 Ku biir Uber Eats haddii aad makhaayad tahay
8 Tallaabooyinka Ka-hortagga Wada-jirka ee ay fulisay Uber Eats
Waa maxay Uber Eats?
Ubear Eats waa madal gaarsiinta guryaha dhijitaalka ah. Waxay ku shaqeysaa codsi kugu xiriirin doona makhaayadahaas gurigaaga u dhow, marka lagu daro kuwa lala xiriiriyo, maanta way ka badan tahay 500, iyadoo aan la tirinayn kuwa la xiriira.
Waxaas oo dhan qalabka mobilada, adigoon guriga ka bixin iyo qasabno yar ayaad dalban kartaa quraac, qado, cunto fudud iyo xitaa casho. Waxaa jiri doona amar ugu yar makhaayad walba, waa mid ka mid ah tilmaamaha Taas oo ay tahay inaan ula qabsanno haddii aan dooneyno inaan ka dalbanno hal ama dhowr suxuun meesha aad ugu jecel tahay.
Codsiga ayaa mas'uul ka ah isku xirka isticmaalayaasha (macaamiisha), makhaayadaha lammaanaha iyo kuwa wax iibiya, dhammaantood si loo dedejiyo amarka sida ugu macquulsan. Uber Eats waxay ka shaqeysaa in ka badan 35 dal oo kala duwan, oo ka kooban magaalooyin waaweyn, si aad u ogaato haddii laga heli karo magaaladaada waxaa fiican inaad booqato degelladooda.
Adeegga Uber Eats kuma istaago barnaamijka kaligiis, sidoo kale iyada oo loo marayo bogga internetka shirkadda waxaad ka dalban kartaa cunno iyo cabitaan kasta qaab fudud. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan ku sameyn karno dhowr tallaabo, dhibaato la'aan badan waxaan dalban karnaa saxanka aan dooneyno xilligaas saxda ah.
Mar alla markii aad furto cinwaanka, waxay ku weydiin doontaa wadada makhaayada oo aad ka rabto in laga helo dhammaan menu-ka, haddii aad doorbideyso nooc cunto ah waxaa fiican inaad aragto dhammaan qaybaha jira. Haddii aad jeceshahay cuntada Shiinaha, cuntada degdegga ah, cuntada Jabbaan, Mareykan ama Talyaani, iyo kuwo kale haddii aad wax walba aragto.
Markaad gasho makhaayada, waxay ku tusin doontaa liiska oo dhan, dhammaantoodna loo qaybiyey oo loo kala saaray, hadday dooranayso menu-ka maalinta, maraq, baastada, iwm. Markaad doorato suxuunta, dhagsii «Add to order», «Next pay», gal habka lacag bixinta oo dhagsii dhammeystirka si aad uga shaqeyso.
Tallaabada ugu horreysa ee haysashada qalabka Android waa inaad soo dejiso barnaamijka Uber Eats, markii la soo dejiyo oo la rakibo waa inaan ku darnaa xog aasaasi ah isticmaalkeeda. Xogtu waa mid qiimo leh, maadaama oo aan ku fulin doonno codsiyada kala duwan ee aan dooneyno waqti kasta.
Mar alla markii aad furto, waa inaad gelisaa lambarka taleefanka, wuxuu kuu soo diri doonaa xaqiijinta lambarka OTP ee ay tahay inaad gasho sanduuqa oo aad sugto inta la ansaxinayo, ka dibna abuuraya lambarka sirta ah. Iyada oo aad had iyo jeer ku heli doonto koontada, gaar ahaan haddii aad badanaa xirto koontada ama barnaamijka ka dib markaad amar bixiso.
Haddii aad sameysay wax walba waxaad ku jiri doontaa arjiga, la wadaag sawir muuqaal ah, sidoo kale buuxi qaar ka mid ah xogta iyo macluumaadka. Waa barnaamij runtii fudud, gaar ahaan haddii aad rabto inaad hesho makhaayad xubin ka ah oo ka dalbo wax kasta liiskaaga qasabno yar.
Uber Eats: gaarsiinta cuntada
Sidee ku bixisaa Uber Eats?
Hababka lacag bixinta ee ugu weyn ee Uber Eats ee waddammada intiisa badani waa kaararka deynta, kaararka bangiga iyo PayPal. Lacag bixintu waa dhakhso, markaa koontada waa la xisaabin doonaa, intaan qofka la keenayo uusan bilaabin inuu tago barta gaarsiinta.
In "Account" macaamiisha waa inay soo galaan habka lacag bixinta, habka ugu nabdoon sida had iyo jeer waa labada midkood, kaarka iyo PayPal. Ma lihid wax komishan ah oo ka shaqeynaya amarrada iyada oo loo marayo Uber Eats, makhaayaddu had iyo jeer waxay u baahan tahay amar ugu yar si loo fuliyo.
Ikhtiyaar cusub oo lagu daray waa kaarka hadiyadda, adigu waxaad ugu isticmaali kartaa si sax ah haddii lagu siiyay ama taa lidkeed, mid sii qofkaas gaarka ah. Bitcoin lama aqbalin, iyo sidoo kale habab kale sida wareejinta, Bizum iyo adeegsiga codsiyada kale ee dibadda.
Mar alla markii aad furto dalabka Uber Eats waxaad ku leedahay afar xulasho xagga hooseWaxay sidoo kale ku tusi doontaa makhaayadahaas kuwa ugu caansan magaalada aad ku nooshahay. "Guriga" waxaad ku haysataa waxa ugu muhiimsan ee aad ka raadin karto oo aad ka heli karto makhaayadaha, xagga sarena waxay ku tuseysaa magaalada waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku darto cinwaanka goobta aad doorbideyso. Intaas waxaa sii dheer, waad ku dari kartaa miirayaasha aad rabto adigoo gujinaya astaanta o - o.
"Baadh" waxaad ku leedahay qaybaha ugu waaweyn, oo isugu jira Burgers, Salad, Japanese, Turkish, Aasiya, Khudrad, Gourmet iyo noocyo kale oo cunto ah Halkan waxaa lagu sifeynayaa haddii waxa aad raadineyso ay yihiin, tusaale ahaan, in la dalbado saxan sushi ah, kebab ama salad dhameystiran.
"Amarada" waxaad ku arki doontaa xaaladda amar kasta oo la dhigo, haddii aad mid leedahay waqtigaas waxaad fursad u leedahay inaad ogaato halka ay ku taal, marka lagu daro la-tashiga macluumaadka tooska ah. Ugu dambeyntiina, "Koontada" qaabeynta waxaa sameeya isticmaalaha, waa inaad ku dartaa xogta lagama maarmaanka ah, habka lacag bixinta, oo ay ku jirto inaad ku biiri karto kooxda Uber haddii aad shaqo raadineyso.
Dalbo Uber Cunnada
Waxaan horey u ogaanay sida Uber Eats u shaqeyso, codsi isu rogay mid fudud oo la isticmaalo waana muhiim marka la dalbanayo cuntada ama cabitaanka guriga. Hadda waa inaan amar ku bixinaa arjiga Android, laakiin xusuusnow, sidoo kale waxaa laga heli karaa macruufka.
Markaad furto dalabka Uber Eats, waxay ku tusinaysaa inaad si caadi ah dhowr maqaaxiyo oo caan ka ah magaaladaada, laakiin ha ka welwelin, waxaa ugu wanaagsan in la sifeeyo raadintaada haddii aad rabto nooc kale oo cunto ah. Waxa ugu fiican had iyo jeer waa in la ogaado cinwaanka saxda ah ee makhaayadda, ugu yaraan wadada, uma baahnid inaad ogaato lambarka.
Mid kasta oo ka mid ah maqaayadaha ayaa leh menu u gaar ahHaddii aad dooranaysid liiska, cabbitaanka haddii aad go'aansato inaad kafee ka dalbato Starbucks, raashinka, iwm. Xulashada mid kasta oo ka mid ah suxuunta ayaa iska leh, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku darto qoraalo haddii aad rabto inaadan qaadin wax gaar ah haddii aad xasaasiyad leedahay.
Si aad uga dalbato Uber Eats, samee waxyaabaha soo socda:
Xul mid ka mid ah maqaayadaha cuntada aad ugu jeceshahay, waad dalban kartaa miirayaasha oo xitaa waxaad isticmaali kartaa mashiinka raadinta si aad uhesho midka aad rabto xilligaas
Markaad gudaha gasho waxaad haysataa dhamaan suxuunta iyo menus-ka xagga hoose, dooro midkood ama dhowr ah iyadoo kuxiran nidaamka ugu yar iyo dooro saxanka, hamburger ama cuntada aad rabtoWaxay sidoo kale tilmaami doontaa cabir ahaan, maraqa ay qaadan karto iyo maaddooyinka kale
Markaad xulato suxuunta iyo cabitaannada, guji "Ku dar gaadhigii" waxayna muujin doontaa waqtiga qiyaasta diyaarinta iyo bixinta amarka, badanaa waa qiyaastii 20 illaa 40 daqiiqo, dhammaantood waxay kuxirantahay masaafada maqaayadaada uga jirto gurigaaga
Uber Eats ayaa isla markiiba wax ka qaban doonta, gaarsiinta dadka ugu dhow makhaayada ayaa awoodi doona inay aqbalaan amarka oo ay qaataan, dhammaantood markay ku soo muuqdaan arjiga dalabyada ee amarada cuntada iyo cabitaanka ee lagu rakibay aaladda moobilkooda
Ku biir Uber Eats haddii aad makhaayad tahay
Makhaayadahaas xiiseynaya inay ka soo muuqdaan Uber Eats waa inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood, tan tan sidoo kale ku dar rikoodh kooban bogga internetka. Hawlgalku waa sida soo socota: Macaamiisha ayaa amar bixiya, adigaa diyaarinaya oo ragga wax geeya ayaa mas'uul ka ah soo qaadistiisa waxayna daqiiqado yar ka dib keenaan.
Marka diiwaangelintu timaaddo, Uber Eats ayaa daraasayn doonta oo diiwaangelin doonta makhaayadda, waxay noqon doontaa makhaayadda geli doonta dhammaan menu-ka guddiga maamulka. Uber Eats waxay ballanqaadday inay kordhin doonto iibinta mid kasta oo ka mid ah ganacsiyada illaa 60%, marka lagu daro joogitaanka mid go'an iibka kala duwan.
Tallaabooyinka Ka-hortagga Wada-jirka ee ay fulisay Uber Eats
Dhammaan alaab-qeybiyeyaasha Uber Eats waxay wataan sahay nadaafadeed: maaskaro, gacmo gashi iyo jel hydroalcoholic ah, oo gaarsiinta gaarsiinta barta uu xushay macaamilka. Waxaa lagu dooran karaa albaabka guriga, albaabka baloogga iyo xitaa meel kale.
Uber Eats waxay ka shaqeysay inay awood u yeelato inay qaadato dhammaan amarada ka dib markii xaaladda digniinta ay ka jirtay Spain iyo dhulal kale, dhammaantood illaa iyo inta maqaayadaha dib loo furayo. Shirkaddu waxay sii wadaa inay ilaaliso qorshe kaas oo shirkadda iyo shaqaalahuba ay si nabadgelyo ah ugu shaqeyn karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waa maxay iyo sidee Uber Eats u shaqeysaa?
5-ka barnaamij ee ugu lacag bixinta badan Android
Top 8 Qashinka & Soo Celinta Faylasha Barnaamijyada loogu talagalay Android